China Zvikamu zvemuchina Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Kufa Kukanda & Kukanda
Zvigadzirwa zvemuchinazvinoumba zvakakosha zvezvinhu zvakasiyana zvemuchina zvigadzirwa nemidziyo. Iyo michina uye maitiro anoshandiswa nazvo anobatanidza iyo yepamusoro nhanho yezvazvino dhizaini dhizaini, zvishandiso, simbi, michina, zvemagetsi, kutonga kwemaindasitiri uye mimwe minda.
Nekuvandudzwa kwetekinoroji, zvikamu zvakaringana uye machining zvinoita basa rinowedzera kukosha mukugadzira kwazvino kwemaindasitiri. MESTECH yanga ichipa vatengi kunyatso kugadziriswa kwesimbi uye isiri-simbi zvikamu kwemakore.
Ndeipi basa rezvakanaka simbi zvikamu zvinotamba muindasitiri yemazuva ano?
Machine chishandiso ndiyo "Maindasitiri amai muchina” . Zvinenge zvese zvemuchina zvigadzirwa zvinogadzirwa hazvipatsanurike kubva kumakanika kugadzirisa. Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwetekinoroji uye zvishandiso, pane hombe kudiwa kwezvakanaka zvikamu, senge ndege, muchadenga, mota, zvekurapa, zvekunyepedzera njere uye chip kugadzira, zvese izvo zvisingaparadzanisike kubva kutsigiro yezvakanaka zvikamu. Maitiro ekuita kumusoro-kugona uye kwakachipa-kudhura kugadzira kwezvakanaka zvikamu inyaya yemachina ekugadzira indasitiri.
High nemazvo zvikamu
Ndeapi marudzi emhando yekugadzirisa maitiro iwe aunoziva?
Precision machining inzira yekushandura saizi kana kuita kweye workpiece kuburikidza neyekugadzirisa muchina. Zvinoenderana neese tembiricha mamiriro eiyo workpiece iri kugadziriswa, inogona kuve yakakamurwa kuita kutonhora kugadzira, kupisa kupisa uye yakakosha kugadzira. Iyo inowanzo gadziridzwa mukamuri tembiricha uye haikonzere shanduko yemakemikari kana yemuviri weiyo workpiece. Inodaidzwa kuti kutonhora kugadzira. Kazhinji, kugadziridza kana pasi peyakajairika tembiricha kunokonzeresa shanduko yemakemikari kana yemuviri weiyo workpiece, iyo inonzi kupisa kwemafuta Kugadziriswa kwekutonhora kunogona kuve kwakakamurwa kuve kucheka uye kumanikidza kugadzirisa maererano nemusiyano wenzira dzekugadzirisa. Kurapa kwekupisa, kugadzira, kukanda uye kuwaya zvakajairika mukushanda kupisa. Kucheka kwakarongeka kunowanzo kuve kwekupedzisira kubatanidza chinongedzo kuverengera kunyatsoitika kwezvikamu, uye zvakare iri chinongedzo pamwe nebasa rakakura kwazvo, kuita zvinopfuura makumi matanhatu muzana zvekugadziriswa kwezvimishini zvikamu.
Chii chinonzi nemazvo Kucheka?
Mechanical Kucheka ndiyo nzira huru yekugadzirisa michina, kureva nzira yekubvisa zvinhu kuburikidza nemichina chaiyo.
Nemazvo zvokuimba nokuveza ari mhando kugadzira muchina dzakakwirira nemazvo. Pane nzira mbiri huru dzekuona chaiyo machining yezvikamu:
(1) Imwe ndeye kushandisa yakanyanya-chaiyo michina maturusi ekugadzirisa akakwira-chaiwo zvikamu, senge kurongedza muchina unofinha, tambo yekukuya, honye kukuya, giya yekugaya, Optical grinder, yakakwira-chaiyo yekunze yekugedza, yakakwira-yakanyatsoita hobvu yekukuya, yakakwira -precision tambo lathe, nezvimwewo. Aya maturusi emuchina akakwenenzverwa akakosha maturusi maturusi, anonyanya kushandiswa kugadzirisa imwe mhando yezvikamu, senge magiya, turbines, sikuruu, maturusi ekucheka, yakakwira-chaiyo yekufambisa shaft uye injini bhokisi, nezvimwe. Aya maturusi emuchina anoshanda zvakanyanya uye akarongeka ekugadzirisa chinangwa chakakosha.
(2) Yechipiri ndeye kushandisa kukanganisa kukanganisa muripo tekinoroji kusimudzira kugadzirisa kunyatsoita kwezvikamu. Iwo makuru ekujekesa ekudzora muchina maturusi ari CNC azvikuya muchina, CNC lathe, CNC mukuyi, CNC unofinha uye wekugaya muchina, uye mukomboni machine centre.
CNC maturusi emuchina anowanzo kuve akazara echinangwa maturusi maturusi, nekuda kwekushandisa kwemakomputa ekuronga tekinoroji, anogona kuve akafanorongedzwa pamakomputa simulation kugadzirisa uye kugadzirisa dambudziko, ine kuenderana kwakanaka uye kuchinjika, inokodzera chimiro chakaomarara, dzakasiyana zvikamu zvekugadzirisa. CNC maturusi emuchina anodhura, asi ivo vanogona kuona iyo otomatiki yekugadzirisa, uye vane yakanaka kudzokorora kugadzirisa kunyatso uye kugadzirwa kwekuita.
Nzira yekusarudza yakakodzera yekugadzirisa michina?
Nekuvandudzwa kwetekinoroji yekudzora tekinoroji, akawanda uye akawanda maturusi maturusi akabatanidzwa neCCC system, kuitira kuti uone iyo otomatiki yekugadzirisa, dzivirira manyore ekushandisa zvikanganiso, uye nekuvandudza iko kugadzirisa kurongeka uye kugadzikana. Naizvozvo, CNC maturusi emuchina anoshandiswa zvakanyanya mumunda wezvakanaka zvikamu zvekugadzira.
(1) CNC yekugadzirisa chaiyo yesimbi yakanaka shaft yakakwira, ine kugadzikana kwekugadzirisa mhando;
(2) Inogona kuita kuwanda-kurongedza kubatanidza uye kugadzirisa zvikamu zvine zvisina kujairika maumbirwo.
(3) Kana zvikamu zveCCC zvehardware yakanaka zvashandurwa, chete chirongwa cheNC chinofanira kuchinjwa kuchengetedza nguva yekugadzirira yekugadzira.
(4) Chishandiso chemuchina pachawo chine huchokwadi hwakanyanya uye kuomarara, uye inogona kusarudza iyo inobatsira kugadzirisa huwandu, uye chiyero chekuburitsa chakakwirira (kazhinji ka3 kusvika ku5 nguva yeiyo yemuchina wekushandisa).
(5) Mashini maturusi akachinjika zvakanyanya uye anogona kudzikisira kusimba kwevashandi.
CNC yakagadziriswa kugadzira uchishandisa mapfupi ekucheka maturusi ndiyo inonyanya kukosha yezvakanaka Hardware zvikamu. Mapfupi macheki anogona kudzikisa zvakanyanya kutsauka kwechishandiso, uyezve wozadzisa yakanakisa yemhando yepamusoro, dzivisa kugadzirisazve, kudzikisa kushandiswa kwetambo, uye kupfupisa iyo EDM yekugadzirisa nguva. Paunenge uchifunga nezve mashanu-akabatana machining, zvinodikanwa kuti utarise musimboti wekushandisa shanu-axis yekugadzirisa kufa: kupedzisa iyo yese workpiece kugadzirisa neiyo ipfupi yekucheka zvinhu sezvazvinogona, asi zvakare kudzora kuronga, kuomesa uye kugadzirisa nguva kuwana mhando yakakwana yepamusoro.
Maitiro ekuita zvine musoro kugadzirisa tekinoroji?
(1) Rough kugadzira danho. Kucheka yakawanda yemubhadharo wekugadzirisa wega wega wekugadzirisa pamusoro uye kuburitsa bhenji chaiyo, chinonyanya kukosha ndechekuvandudza kugadzirwa zvakanyanya sezvinobvira.
(2) Semi-yekupedzisa nhanho. Bvisa zvinokwanisika zvikanganiso mushure mekugadziriswa kwekugadzirisa, gadzirira kupedzisa kwechitarisiko, zvinoda kusvika pakudikanwa kwekugadzirisa kurongeka, kuve nechokwadi chakakodzera kupedzisa mvumo, uye kupedzisa yechipiri pamusoro pekugadzirisa pamwechete.
(3) Kupedza nhanho. Mune ino nhanho, hombe yekumhanyisa kumhanyisa, chidiki chikafu uye kudzika kudzika zvinosarudzwa kubvisa mugove wekupedzisa wakasara neyakaitika maitiro kuitira kuti kuoneka kwezvikamu kuzadzikise hunyanzvi zvinodiwa zvemadhirowa.
(4) Ultrafine machining nhanho. Inonyanya kushandiswa kudzikisira kukosha kwehukama hwepamusoro kana kusimbisa iko kutaridzika. Inonyanya kushandiswa kugadziriswa kwepamusoro neakanyanya kudikanwa epasirese kusagadzikana (ra <0.32 um).
(5) Ultra-yakanaka yekugadzirisa nhanho. Kugadzira machining kuri 0.1-0.01 micron uye pamusoro roughness ukoshi RA idiki pane 0,001 micron. Idzo nzira huru dzekugadzirisa ndedze: kutema kwakanaka, kugaya girazi, kukuya kwakanaka uye kupora.
Nzira yekusarudza sei yakakodzera zvinhu zveiyo workpiece?
Kugadziriswa kwekugadzirisa, kwete zvese mbishi zvigadzirwa zvingangoda kuita nemazvo kugadzira, zvimwe mbishi zvinhu zvakanyanyisa kuoma, kupfuurisa kuomarara kwekugadzirisa michina zvikamu, zvinogona kudonha zvikamu zvemuchina, saka izvi zvigadzirwa zvisineyi hazvina kukodzera kunyatso kugadziriswa kwemuchina, kunze kwekunge iyo inogadzirwa neyeakasarudzika mbishi zvigadzirwa, kana laser kucheka.
Iyo mbichana michina yekunyatso machining inogona kukamurwa muzvikamu zviviri, simbi mbishi zvinhu uye isiri-simbi mbishi zvinhu.
Kana zviri zvesimbi mbishi zvinhu, kuomarara kwembichana simbi kwakakwirira, kuchiteverwa nesimbi yakakandwa, ichiteverwa nendarira uye yakapfava aluminium.
Iko kugadzirwa kwe ceramics uye mapurasitiki ndeyekugadziriswa kweasina-esimbi mbishi zvigadzirwa.
1. Chekutanga pane zvese, zvikamu zvacho zvinofanirwa kunge zvine mwero wekuomarara. Kune kumwe kunyorera, iko kukwirira kwekuoma kwechinhu chisina chinhu, zvirinani. Izvo zvinongogumira kune kuomarara zvinodikanwa zvezvikamu zvakagadzirwa. Iyo michina yekugadzira haigone kuve yakaoma zvakanyanya. Kana iwo akaomarara kupfuura iwo mativi akavezwa, haakwanise kuvezwa.
2. Chechipiri, izvo zvinhu zvine mwero mukuoma uye kupfava. Chikamu chimwe chete chekuomarara chakadzika pane icho chemuchina zvikamu. Panguva imwecheteyo, zvinoenderana nebasa remidziyo yakagadziriswa uye kusarudzwa kwakaringana kwezvinhu zvemuchina zvikamu.
Muchidimbu, kuchine zvimwe zvinodikanwa zvemhando yepamusoro mune chaiyo machining, kwete zvese zvigadzirwa zvinokodzera kugadziriswa, senge zvakapfava kana zvakaoma mbishi zvinhu, zvekare hazvidikanwe kugadzirisa, uye zvekupedzisira hazvigone kugadzirisa.
Mestech inopa vatengi kugadzirwa nekugadziriswa kwezvakanaka simbi zvikamu. Kana uchida rumwe ruzivo, ndapota taura nesu.
Pashure: Cnc machine
Zvadaro: Medical epurasitiki jekiseni muforoma uye kuumbwa
Brass Machined Zvikamu
Yakakwira Precision Machined Zvikamu
Zvigadzirwa zvemuchina Kugadzira
Zvigadzirwa zvemuchina Zvinodiwa
Nemazvo machine psac Zvikamu